Maareeye ku xigeenka wakaaladda Biyaha Berbera oo ka waramay xaaladda biyaha ee degmadaasi iyo waxyaabahii u qabsoomay - Xogside
Home WARARKA DALKA Maareeye ku xigeenka wakaaladda Biyaha Berbera oo ka waramay xaaladda biyaha ee...
Maareeye ku xigeenka wakaaladda Biyaha Berbera oo ka waramay xaaladda biyaha ee degmadaasi iyo waxyaabahii u qabsoomay
Maareeye ku xigeenka wakaaladda Biyaha Berbera ayaa ka waramay xaaladda biyaha ee degmadaasi iyo waxyaabahii u qabsoomay.
Abokor Bille Isaxaaq Maareeye ku xigeenka wakaaladda Biyaha Berbera ayaa sheegay in xaaladda Biyaha ee degamda Berbera hadda ku jirto xilligii ugu wanaagsanaa iyadoo hore usoo martay marxalado kala duwan hadana uu qofkastaaba gurigiisa qasabadda ku jirta uu ka dhaansado. Waxaanu sheegay inay masuuliyadi ka saaran tahay ayna u taagan yihiin shacabka Berbera uga haqab tiri lahaayeen inay helaan Biyo ku filan madaama lagu jiro xiligii xagaaga ee Kulaylka.
Maareeye ku xigeenka wakaaladda Biyaha Berbera ayaa sheegay sidoo kale inay wax ka qabteen intii karaankooda ah haday tahay wax ka baddelka Beebabka, hagaajinta Ceelasha xumaaday iyo soo kordhinta Ceelal cusub.
Ugu dambayna waxa uu u mahad celiyay Abokor Bille Isaxaaq Maareeye ku xigeenka wakaaladda Biyaha Berbera cid kasta oo kala shaqaysa Biyaha haday tahay dawladda dhexe midda hoose iyo hay’adaha la shaqeeya. Waxaanu bulshada ka codsaday inay kala shaqeeyaan lana socod siiyaan waxii caqabad ama cilado ah ee soo kordha
Previous articleWasaaradda Isgaadhsiinta iyo Technology-yadda Somaliland oo dood cilmiyeed ku qabatay Hargeysa
Next articleWasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta Kalluumaysiga Somaliland oo ka waramay xaaladda xanuun dalka ku cusub lagu magacaabo Guux
Xukuumadda Somaliland Oo Sharraxaad Ka Bixisay Faaiidooyinka Heshiiska Dp World Iyo CDC